I-JC Sky River Front 'Ikhaya Lomoya Oshisayo' w/ Ukubuka Okumangalisayo - I-Airbnb
I-JC Sky River Front 'Ikhaya Lomoya Oshisayo' w/ Ukubuka Okumangalisayo
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Joshua
I-condominium ethokomele e-Sky River Front Service Apartment (Kiara D'Riva) iza namagumbi okulala ama-3 ahlala abantu abangu-5-7. Itimu yaleli fulethi ikakhulukazi izungeza Isitayela se-Bali - ukuphumula nokushaya umoya, futhi iza nokubukwa komfula odume kabi komfula i-Kelantan enengxube yokubukwa kwedolobha lase-Kota Bharu, ukubuka kungabonwa kuwo wonke amagumbi okuhlanganisa ne-balcony. Bhukha manje ukuze ubalekele ngokushesha empilweni ematasatasa futhi uphefumule ngokushesha ngalokho uKota Bharu azokunikeza!
Zonke izidingo eziyisisekelo zizohlinzekwa njengamathawula okugeza, i-ayina yezingubo kanye nebhodi lokusansimbi, ishampoo yomzimba neyezinwele, izitsha zasekhishini, umpheki wokungeniswa, amabhodwe okupheka, i-microwave futhi wonke amagumbi afakelwe umgqomo kadoti.
Ukuze uthole omatilasi namathawula engeziwe kuzonikezwa uma kuceliwe.
4.56 · 70 okushiwo abanye
Ukuvikeleka okukhulu kwekhondomu, omakhelwane abazungezile banokuthula futhi banokuthula, ikhefi nezindawo zokudlela eziningi ezaziwa kakhulu kubantu bendawo zitholakala ebangeni elingamamitha angama-500, kanye nenxanxathela yezitolo njenge-Aeon mall kanye neTesco kungaphakathi kwe-3km ukufinyelelwa kuyo.
Kukhona omakhelwane eduze kwebhlokhi, ngakho ukulawulwa komsindo kuyaziswa kakhulu, ibhilidi lifakwe ikhamera yokugada kuzo zonke izitezi ngenjongo yokuphepha nokuvikeleka, namalungu ekomiti ebhilidi akhuthele kakhulu.
Izinqubo zethu ezivamile zincike kakhulu ohlelweni lokuzihlola wena, kodwa sivuleleka ngokusebenzisana ubuso nobuso lapho sicela. Konke ukubhukha kufanele kubhukhwe okungenani izinsuku ezi-2 ngaphambi kosuku lokufika ukuze kuhlanzwe futhi kulungiswe izinjongo zokugcina, ukungena kuzoba ngo-3pm futhi ukuphuma kuzoba ngo-12pm.
Ukutholakala komsingathi kuzosuka ngo-9am kuye ku-7pm, izinsuku ezingu-7 ngesonto.
Izinqubo zethu ezivamile zincike kakhulu ohlelweni lokuzihlola wena, kodwa sivuleleka ngokusebenzisana ubuso nobuso lapho sicela. Konke ukubhukha kufanele kubhukhwe okungenani izin…